सोनी को PS4 गर्न भज एक र PS2 खेल हुनेछ - समाचार नियम
सोनी को PS4 गर्न भज एक र PS2 खेल हुनेछ
प्लेस्टेशन विपरीत3(PS3) अनुकरण, जो नयाँ प्लेस्टेशन अब अनलाइन सेवा टाढैबाट होस्ट गरिनेछ, Canon एक अनुकरण इन्जिन द्वारा स्थानीय अनुवाद गरिनेछ सोनी गरेको प्लेस्टेशन मा पहिले कन्सोलबाट लागि खेल.
यस अनुसार Eurogamer, को emulators मात्र विगतका क्लासिक खेल उर्तानु छैन, तर तिनीहरूलाई नेतृत्व छैन भन्ने पनि तिनीहरूलाई छ upscale तरिकामा विगतमा रूपमा धमिलो गडबड बन्ने. एक लागि अवधारणा “HD रिमास्टर” मक्खी मा समर्थन गर्न प्रयोग भइरहेको कि बादल सेवा भन्दा प्रयोगकर्तालाई थप आकर्षक हुनेछ PS3 खेल.
त्यो शीर्षक समय मा प्लेस्टेशन नेटवर्क हुनेछ सोचा छ, र सुविधाहरू धेरै प्लेस्टेशन मा अब प्रतिकृति गरिने. तथापि, किनभने पुरानो खेल को तल्लो स्क्रीन परिभाषा को, यो स्वीकार्य स्तरमा खेल अद्यावधिक गर्न PS4 शक्ति वृद्धि प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ.
यो प्रश्न गर्न जान्छ, यदि सोनी पुरानो पुस्ता खेल सांत्वना लागि यो गरिरहेको छ, किन छ यो PS3 शीर्षकका लागि बादल सेवा गर्न प्रतिबद्ध? जाहिर जवाफ पैसा छ, यो प्रशंसक जसको सद्गुण सोनी फेरि सबै भन्दा लोकप्रिय PS3 मा खेल भुक्तानी गर्न यसको वर्तमान PS4 मार्केटिङ अभियान मा extolls लागि मौका छ रूपमा.
Moodys जंक गर्न सोनी क्रेडिट स्थिति कम छ रूपमा, जापानी प्रविधिको विशाल यसको PS3 को वफादार fanbase मा क्यापिटलाइज थप तरिकाहरू फेला छ खेल कन्सोल. यसैबीच, बेलायत मा बेकारी PS3 अप्टिकल डिस्क फोहर फाल्न दान पसलहरूमा को बवासीर. पु
यो लेख, सोनी को PS4 गर्न भज एक र PS2 खेल हुनेछ, बाट सिन्डिकेट छ यो इन्क्वायरर र अनुमति यहाँ पोस्ट.
27721	2 प्लेस्टेशन को सूची3खेल, प्लेस्टेशन, प्लेस्टेशन नेटवर्क, सोनी
← किशोर Ringleader वेश्यावृत्ति रिङ मा दोषी 25 तपाईंको चयापचय बढावा फूड्स आश्चर्य →